Homeसमाचारकेटिले केटि संगै बिहे गरे, यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित)
February 11, 2021 admin समाचार 5693
केही दिन अघि काठमाडौमा केटा र केटाबीचको वि’वाहको निकै चर्चा भएको थियो । अहिले फेरी दुई युवतीबीचको विवाह पनि सा’र्वजनिक भएको छ । दुई युवती मध्य एक जना श्रीमान र अर्को श्रीमती बनेका छन् । श्रीमान बनेकी युवतीको हा’उभाउ भने केटा मानिसको जस्तै छ । हाम्रो समाजमा सम लिं’गी बीचको विवाह पनि सामान्य बन्न थालेको छ । यि जोडी पनि भर्खर विवाह ब’न्धनमा बाँधिएका हुन् ।
एक जनाको नाम रविना केसी र म’मता केसी(खड्का) हो । गोर्खाका उनीहरुले विवाह पछि मम’ताले आफ्नो थर पनि परिवर्तन गरेर खड्कावाट केसी भएकी छन् । उनीहरु अध्ययनको शिल’सिलामा संगै बस्थे । त्यती बेला उनीहरुबीच त्यस्तो यो’जना केही थिइन । दुवै जनाले एउटै केटासंग विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए । तर दुवै जना एक अर्कासंग छु’ट्टीएर बस्न नसक्ने भएपछि विवाह गरेर संगै बस्ने नि’र्णय गरे ।
दुई जनाले तीन साता अघि नजिकैको मन्दिरमा गएर वि’वाह गरेका हुन् । आफ्ना साथीहरुले पनि दुई जनाको सम्ब’न्ध स्वीकार गरेको बताएका छन् । दुवै जनाको परिवारवाट पनि स्वी’कार गरेका कारण पनि कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । उनीहरु एउटै गाउँ र छिमेककै भएका कारण ५ कक्षा देखि नै संगै खेले हु’र्केको बताएका छन् ।
त्यसैले पनि उनीहरुले एक अर्कालाई छो’ड्न नसकेकाले विवाह नै गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुको केही समय केटासंग प्रेम भएपनि दुवैको ब्रे’कअप भएपछि संगै बस्ने नि’र्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफुहरुलाई पुरुषको शरिर नचा’हिएको बताएका छन् । – इताजा खबरबाट
मेरी बास्सैकी मुइयाको श्रीमान सहितको रमाइलो कमेडी, आमा गुमाउँदाको पिडा सम्झेर भाबुक (भिडियो सहित)
श्रीमतीले श्रीमान् बोक्ने प्रतियोगिता, नारी दिवसको अवसरमा (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 8, 2021 admin समाचार 4774
नारी दिवसका अवसरमा तनहुँको देव’घाट गाउँपालिकाले श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौ’डिने प्रतियोगिता आ’योजना गरिएको छ । एक सय एघारौँ नारी दिवसका अवसरमा गाउँपा’लिकाले यही फागुन २४ गते सो प्रतियोगिता गरिएको हो । देवघाट–५ स्थित कालिका माध्यमिक
May 23, 2021 admin समाचार 4155
May 11, 2021 admin समाचार 4027
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227929)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220876)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220727)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217746)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216803)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215446)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214201)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (214088)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182565)